Thriller - Myanmar Asian TV
A Perfect World ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာ Clint Eastwood ကအကောင်းဆုံး ပုံဖော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒရာမာဆန်ဆန် ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ၁၃၈ မိနစ်စာကြာမြင့်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Warner Bros. က ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၃၅.၁ သန်းရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Butch (Kevin…
က်ပေးချင်တဲ့ကားလေးကတော့၂၀၁၂ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ စပိန်ရုပ်ရှင် The Body ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူထားတဲ့ The Vanished ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Review**** ဆေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ သူဋ္ဌေးမယွန်းဆိုဟီး… ယွန်းဆိုဟီးရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူ ပရော်ဖက်ဂျင်ဟန်က ဟဲဂျင်ဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးနဲ့ ချစ်ကြိုက်နေတာကြောင့် သူလေ့လာနေတဲ့မေ့ဆေးအသစ်တစ်မျိုးကို ယွန်းဆိုဟီးသောက်မယ့်အရက်ထဲထည့်ပြီး တိုက်လိုက်တာကြောင့် ယွန်းဆိုဟီးသေဆုံးသွားတယ် အဲ့ဒီဆေးက အာရုံကြောတွေတုံ့ဆိုင်းသွားစေပြီး ဘာသဲလွန်စမှမကျန်ဘဲနဲ့ သေဆုံးစေတဲ့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ် အသုဘအခမ်းအနားနေ့ညမှာပဲ ကိုရီးယားဆေးသိပ္ပံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနကနေ ယွန်းဆိုဟီးအလာင်းကထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားတယ် ရဲအရာရှိဂျောင်ရှစ်နဲ့အဖွဲ့ကအမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြတယ် ညတွင်းချင်းပဲရဲကအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ ပတ်ဂျင်ဟန်ရောက်လာပြီး…
True Fiction ( 2018 )
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံကား ရိုက်ကူးထားသော ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် …. အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Ji Hyun-woo, Oh Man-seok, Lee Eun-woo, Kim Hak-cheol နှင့် Jo Eun-Ji တို့ကို တွေ့မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …. မြို့တော်ဝန်လောင်း Lee…
The Happening ( 2008 )
မကြာသေးခင်ကပဲ Netflix က ဇာတ်ကားတခုဖြစ်တဲ့ Bird Box ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို အားလုံးလဲ ကြည့်ဖူးကြပြီလို့ ထင်ပါတယ် … A Quite Place နဲ့ The Happening ကို ရောသမမွှေထားသလို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလိုပဲလို့ ပြောနေကြပါတယ် … ဆိုတော့ A Quiet Place ကတော့ ကြည့်ဖူးထားကြပြီး…
2014 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Josh Malerman ရဲ့ Bird Box ဝတ္ထုကို အခြေခံပြီး အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Director Susanne Bier က ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … Apocalyptic ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝါရင့်မင်းသမီးကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Sandra Bullock နဲ့ Sarah Paulson တို့က…
The Scam ( 2009 )
စီနီယာရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့် စတော့ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာက ရင်းနှီးသမျှ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ယောင်းဆူတစ်ယောက် စတော့ရှယ်ယာနဲ့ပဲ ကြီးပွားအောင်လုပ်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ငါးနှစ်ကြာ စတော့ရှယ်ယာလောကတွင် ကျင်လည်ပြီးနောက် သူ ဝယ်ရောင်းလုပ်မိတဲ့ရှယ်ယာတွေက စတော့ကစားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့လှည့်ကွက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ ထိုအဖွဲ့ရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာပြီး ထိုအဖွဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ယောင်းဆူတစ်ယောက် ထိုအဖွဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရင်း သူ့ကို အဖွဲ့သားအချင်းချင်းကြားထဲ ဓားစားခံလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အခါ သူဘယ်လိုဉာဏ်သုံးပြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲ တကယ့်စတော့ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုရမယ့် ကိုရီးယားစတော့ရှယ်ယာလောကနောက်ခံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ် Main castsတွေကတော့ Park Yong-ha,Kim Min-jung…
Death Bell ( 2008 )
ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးမဲ့ကားကတော့ horror ဆန်ဆန် စိတ္ဆဇ ဆန်ဆန် ကိုးရီးယားကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့ ချန်ဂင်အထက်တန်းကျောင်းမှာအရင်ကစာအရမ်းတော်တဲ့ ကင်ဂျီဝန်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် တစ်နေ့မှာ အဲကျောင်းသူလေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတယ် ဆိုပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ် အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ၂နှစ်လောက်ကြာပြီး နောက်စာသင်နှစ် အဆုံးမှာကျောင်းအုပ်ကြီးကကျောင်းရဲ့အတော်ဆုံးသူတွေ စုပြီးတော့ အထူးတန်းတစ်တန်း လုပ်ဖို့ တာဝန်ပေးခဲ့တယ် အထူးတန်းစတဲ့နေ့ကစပြီး ကျောင်းမှာ မသင်္ကာစရာတွေ စဖြစ်လာပါတော့တယ် တစ်စုံတစ်ယောက်က…
2018 ရဲ့ ပေါက်ကားတစ်ကားလို့ ယူဆလို့ရနိုင်တဲ့ Truth or Dare ဆိုတဲ့ Horror ကားလေးတစ်ကား ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ … ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတော့ Insidious , The Purge , Paranormal Activity , Sinister အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီး Horror ရုပ်ရှင်အများအပြားကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Blumhouse Productions ကပဲ…